सरुवा भएर पनि असुलीमा मस्त सशस्त्रका घुमुवा « Drishti News – Nepalese News Portal
सरुवा भएर पनि असुलीमा मस्त सशस्त्रका घुमुवा
काठमाडौं, १८ कात्तिक । रुपन्देहीमा सीमा क्षेत्रबाट तस्करसँग मिलेका सशस्त्रका घुमुवा (सिभिल) प्रहरीको सरुवा भए पनि असुली धन्दा छाडेका छैनन् । सशस्त्र प्रहरी बल नं. २७ गण हे.क्वा. रुपन्देहीका घुमुवा सहायक हवल्दार प्रदीप जवरा र जवान सन्नी चौधरीको असुली धन्दा अझै नरोकिएको समाचार स्रोत बताउँछ ।
दृष्टि साप्ताहिक र यसको अनलाइन संस्करणमा सशस्त्र प्रहरीका घुमुवा जवरा र चौधरीले तस्करसँग मिलेमतो गरी भारतसँग सीमा जोडिएका रुपन्देहीका विभिन्न नाकाबाट तस्करी गराउँदै आएको विषयमा पटकपटक समाचार प्रकाशित भएपछि उनीहरुको सरुवा गरिएको थियो । जवराको बुटवल नयाँ गाउँमा रहेको सशस्त्र प्रहरी बेस क्याम्प र चौधरीको पश्चि अमवामा रहेको सशस्त्र प्रहरी बेसमा सरुवा भएको थियो ।
तर कागजी प्रक्रियामा सरुवा भएको देखाइए पनि जवरा र चौधरी सशस्त्र प्रहरी बल नं. २७ गण हे.क्वा रुपन्देहीमा नै बसेर घुमुवाको काम गरिरहेको स्रोतले बताएको छ । जवरा र चौधरीले कपडा र हार्डवेयर तस्करी अफरोज खानसँग सेट्रिमा तस्करी गरेको स्रोत बताउँछ । घुमुवाकै मिलेमतोमा भारतसँग सीमा जोडिएका रुपन्देहीका दर्जन बढी नाकाबाट कपडा, हार्डवेयर, मोटरपार्ट्, खसीबोका, कुखुरा, मरिच, सुपारी, काजु, किसमिस, मटर लगायत तस्करी हुँदै आएको छ ।
महामारीका बेला भारतसँगको सीमानाका बन्द हुँदासमेत सशस्त्रका घुमुवाले मिलेमतोमा तस्करी गराई मासिक लाखौं असुली गरिरहेका हुन् । यतिसम्मकी यी दुई घुमुवाले माथिल्लो तहका सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरुसँग मिलेर जिल्लाका अधिकृतहरुलाई समेत टेर्दैनन् ।
सशस्त्रका घुमुवाले खसीकुखुराको तस्कर समसुद्धिन मुसलमानसँग सेटिङ गरेका छन् । यसैगरी चिनी र तेल तस्करी आकाशसँग र धान गहुँ तस्करहरु नरेश यादवसँग सेटिङ मिलाएर तस्करी गर्दै आएका छन् । लुरे मुसलमानबाट पनि मासिकी बुझ्छन् । यस्तै, इलेक्ट्रिक सामान तस्करी राजकुमार यादव पनि भैँसी तस्करी बद्री यादव, मटर, दाल तस्कर सुरज यादवसँग सेटिङ छ । मलखाद तस्करी रञ्जित ढाँडीबाट पनि मासिकी बुझ्छन् ।
यस्तै शंकरपुर (एअरपोर्ट पछाडि) राजु मुसलमानले तस्करी गर्दै आएका छन् । उनले सशस्त्रका घुमुवालाई मासिक एक लाख बुझाउँछन् । दृष्टिलाई प्राप्त प्रमाणअनुसार सशस्त्रका घुमुवाले हार्डवेयर र कपडा तस्करीहरु लल्लु मुसलमान, उमेश गुप्ता, अखलेस ढाँडी, मंगल यादव, शेषन यादवबाट मासिक बुझ्दै आएका छन् ।
खासगरी पछिल्लो समय मेउडिहवा, दुर्गौलिया, एअरपोर्ट पछाडिको नाकाबाट अत्यधिक तस्करी हुँदै आएको छ । भारतसँग सीमा जोडिएका रुपन्देहीका सबैजसो नाकाबाट तस्करी हुने गरे पनि पछिल्लो समय एअरपोर्ट पछाडि, मर्चवार, सेमलपानी, बुचीबर्मा, लुम्बिनीबाट बढी अवैध सामान नेपाल भित्रीरहेको छ । तस्करले मोटरसाइकल र साइकलमा रातदिन भारतबाट नेपालतर्फ तस्करी गरी सामान भित्र्याउँछन् तर माथिल्लो तहको मिलेमतो हुँदा अवैध क्रियाकलाप रोकिन नसकेको र घुमुवार जवरा र चौधरीलाई समेत हटाउन नसकेको स्यम् सशस्त्रका अधिकारी बताउँछन् ।